क्रिस्टियानो रोनाल्डो: यूरोपियन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका बादशाह !! – " सुलभ खबर "
क्रिस्टियानो रोनाल्डो: यूरोपियन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका बादशाह !!
पोर्चुगी स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपियन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् । विश्व सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेलाडीको सुचीमा समेत रोनाल्डो दोश्रो स्थानमा रहेका छन् । यूरोपियन सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेलाडीमा रोनाल्डो पश्चात मात्र फेरेंक पुस्कासको नाम आउछ, पुस्कासको नाममा ८४ गोल रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या रोनाल्डोका नाममा ९९ गोल रहेको छ । उनले ९९ गोल पुर्याउनका निम्ति १६४ खेल खेलेका छन् । विश्व सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेल्दै इरानका अलि दाएइ हुन् उनको नाममा १०९ गोल रहेको छ ।रोनाल्डोले आफ्नै घरेलु मैदान मै ४७ गोल गरेका छन् । रोनाल्डोले खेलेको ५४ खेलमा जित निकाल्नुको साथै ६५ खेलमा गोल गरेका छन् ।
९९ गोलको दौडमा रोनाल्डोले ९ ह्याट्रिक गोल गरेका थिए साथै २ खेलमा4गोल गरेका थिए ।अन्तिम ह्याट्रिक रोनाल्डोले २०१९ नेसन्स लिग अन्तर्गत लिथुएनिया विरुद्ध गरेका थिए ।
९९ गोलको आकडा पुर्याउदा रोनाल्डोले यूरोपियन विभिन्न रेकर्ड सर्वाधिक धेरै गोल साथै २ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ट्रफी समेत दिलाएका छन् । उनले यूरोपियन च्याम्पियनसिपमा अन्तर्गतका सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेलाडी समेत हुन् । क्वालिफाइ खेल संहित उनको नाममा ४० गोल रहेको छ ।रोनाल्डोको स्तरमा कुनै खेलाडी पुएग्का छैनन्, साथै गोल रेकर्डलाई हेर्दा रोनाल्डो यूरोपियन फुटबलका बादशाह हुन् भन्दा फरक नहोला ।